အပြိုင်ကြဲကြသည် – Grab Love Story
မြမြက မောင်အေးနှင့်အိမ်နီးချင်း။သို့ သော်ဘဝတွေမှာမိုးနဲ့မြေပမာကွာခြား၏။မြမြ တို့ က ချမ်းသာသည်။ ယောက်ျားကဆန်ကုန်သည်။ကား ၂စီးရှိသည်။ရွှေပေါင် ငွေတိုးလည်း ပေးသည်။မောင်အေးတို့ ကလင် မယား၂ ယောက်လုံးအလုပ်သမား။ မိန်းမက ဆေးလိပ်လိပ်။ မောင်အေး ကျဖမ်းသမား။ကားနောက်လိုက်သည်။လက်သမားလည်း မ တောက် တ ခေါက်။
ထိုနေ့ က မိုးက အ ခြေမရှိဘဲ စွတ် ရွာသည်။မောင်အေး အလုပ်မရှိ။ မိန်းမက ဆေးလိပ်ခုံသွားသဖြင့် သူတ ယောက်ထဲ အိမ်မှာ ပျင်းနေသည်။ဒါနဲ့ ဟိုဘက်အိမ်က မြမြဆီသွားပြီး ငွေ ၂ ထောင်လောက်ချေးမည်။ ပြီးတော့ ဇေတဝန် ဦးဇင်းပေးထားသော ၆၃၃ က လေး သွားထိုးဘို့ တွေးမိ၏။အင်း ! ၂ ထောင် ဘိုးပေါက်လည်း မနဲဘူး။
သူရောက်တော့ မြမြ က အိမ်မှာ တန်းလျားပေါ်လှဲရင်းမဂ္ဂဇင်းတအုပ်ဖတ်နေသည်။မြမြ ကြည့်ရတာ တမျိုးဘဲ ဟုသူထင်သည်။ခါတိုင်းလို ဖော်ဖော်ရွေရွေ မဟုတ်။ စကားလည်းနည်းနေသည်။မောင်အေးက ချဲဂဏန်းအ ကြောင်းပြောတော့လည်း အရင် လို စိတ်ဝင်စား ပုံမပြ။သူ့ ကို တချက် တချက် စိုက်ကြည့်ပြန်သည်။ကြာတော့ မောင်အေး အ နေရခက်လာ၏။ဘာလဲဟ။ မြမြက တို့ လိုငမွဲ အဖက် မလုပ်ချင်တာများလား။မောင်အေး စဉ်းစားရ ကြပ်နေသည်။မမြ အိမ်ထဲဝင် ပိုက်ဆံယူတော့ သူ့ မျက်စိကမမြဖတ်လက်စ မက်ကဇင်းဆီ ရောက်သွား၏။ပြစ်မှု မက်ကဇင်း။ မှောက်ထားတာ ခိုးလှန်ကြည့်တော့ မုဒိမ်း ဇာတ်လမ်း။
ဟာ ! မဟုတ်မှ လွဲရော့။ ကောင် မကြီး တ ယောက်ထဲ ဒါတွေဖတ် ပြီး ဖီးတက်နေတာများလား။ယောက်ျားကြီးက မရှိ။ မန္တ လေး ဆန်သွားပို့ နေတာဖြစ်သည်။မြမြက သူ့ ဆီ ပိုက်ဆံလာပေးတော့ မောင်အေးနှာခေါင်းက အနံ့ဆန်းတခု ရှူမိသည်။ စိမ်းရွှေရွှေအနံ့။ဘာ နံ့ကြီးလဲကွာ။မောင်အေး တွေးမရ နိုင်။မောင်အေး မြမြအိမ်က ထွက်လာရ သော်လည်းစိတ်မပါ။မမြပုံစံ ထူးဆန်းနေတဲ့ အ ကြောင်းရင်းတွေကိုသိချင် လှ၏။ သူထင် မိတာတော့ မြမြ ဖီးတက်နေ၏။ ဟုတ်နိုင်ပါ့မလား။အာ့့ မြမြဆီက အနံ့။အခုမှ သတိရပြီ။ သူ့ မ်ိန်းမ သူနဲ့လုပ်တိုင်း ထွက်လာတဲ့ အရည် အနံ့ဘဲ။ လက်စသတ်တော့။
ဟုတ်ပြီ။မောင်အေး နောက်ပြန်လှည့်သည်။မြမြအိမ်ကို သွားမည်။မမြ ရေ ။ နောက်ထပ် ၅ ထောင် ထပ်ပေးပါဦးဟ။မောင်အေး က မြမြ ပိုက်ဆံလာအ ပေးမှာ စိုက်ကြည့်၏။ ကောင် မ ကလည်း သူ့ ကို အ တော်ကြာပြန်စိုက်ကြည့်ပြီးမှ မျက်လွှာချသွားသည်။မောင်အေးက မညံ့။ပိုက်ဆံယူရင်း မြမြလက်ကို မ တော်တဆလိုလိုနဲ့မိမိရရ ကိုင် စမ်းသည်။နွေးကနဲ အိကနဲ။ ၂ ယောက်လုံး ပူထူသွား၏။နောက် မြမြက စာအုပ် ကောက်ကိုင်တော့ သူကစာအုပ်က ကောင်းလားဆိုပြီး အနားလိုက်ကပ်ထိုင် သည်။ ပေါင် ချင်း ထိနေ၏်။
မြမြ မဖယ်ပါ။ ငြိမ်နေသည်။စာအုပ်ကို ဖတ်ဘို့ သူက ကိုယ်ချင်းထိအောင်ကပ်သည်။ ကြည်ကြည်သာသာပင်။၅မိနစ်လောက်ကြာတော့ မောင်အေး မ နေနိုင်ပါ။ဖြစ်ချင် ရာဖြစ်။ မြမြ ကို သိမ်းဖက်ကာ နို့အုံကြီးကိုကိုင်လိုက်သည်။ဘော်လီက ခံနေသည်မို့ သိပ်တော့ အားမရ။ကိုင် လို့တော့ အရမ်းကောင်း၏။မြမြ ဘာမှ မ ပြော မသိသလိုလုပ်နေ၍လို့ မောင်အေးက သူမ နို့အုံကြီးကို နည်းနည်း ဖိညှစ်တော့သူ့ လက်ကို အသာဆွဲ ဖြုတ် ဖယ်ပြီးဟင် ! လူလည်ကျလှ ချေလား။ ခများလည်း မိန်းမနဲ့ဘဲ။ သွား ခများမိန်းမကြီး သွားကိုင်ချေ တဲ့။ချစ်စဖွယ် မျက်စောင်းလေး ထိုး ပြောတယ်။
မြမြ ညုသံ ညုဟန်လေးကြောင့် မောင်အေး ပိုစိတ်ထန်လာသည်။ချစ်လို့ ပါမြရယ်။ ကို ခိုးချစ်နေတာကြာလှပြီ။တကယ်ပါကွာ ။ပြောလည်းပြော လှုပ်လည်း လှုပ်ရှား၏။မြမြအင်္ကျီကြယ်သီးတွေ ဖြုတ် ၊ ဗလာစီယာကိုအ ပေါ်ဆွဲ မ သည်။ ဖြတ်ဆို မြမြရဲ့ ဖြူဖွေး လုံးဝန်းတဲ့ နို့တွေအပြင်လောကထဲ ထွက်လာသည်။မောင်အေး အငမ်းမရ စို့ သည်။ ကိုင်ဆုပ်သည်။မြမြကအလိုက်သင့်ကော့ပေး၍ ပို စို့ ကောင်း စိတ်ပို ထန်လာပါသည်။မောင်အေး ညာလက် က မြမြ ပေါင်ကြား လှမ်းနှိုက်မြမြဟာကို အုပ်ကိုင် ပွတ်ပေးသည်။မြမြက လည်း မောင်အေး ပေါင်ကြားကို လက်နှိုက်ပြီး အ ချောင်းကို ဆုပ် လျှောရှီး လုပ်၏။မောင်အေး အရမ်း မွှန်လာသည်။မြမြကို အသာဆွဲလှဲ အဝတ်အစားတွေချွတ်၏။
မာင်အေးသည် ကုတင်ပေါ်က မြမြ၏ မိမွေးတိုင်းဖ မွေးတိုင်း အလှကို ခနမျှ ငေးမောကြည့်နေမိသည်။အော် အရင် ကဆို ဒီလို သူဌေး အ ချောမကြီးကိုတက်ဆော်ဘို့ ဆိုတာစိတ်ကူးတောင် မယဉ်ဝံ့။ယခု ဘာမှလည်း အချိတ်အဆက် မရှိဘဲ ကံပေးလာလို့နွှာခွင့်ရ ပေပြီ လို့ တွေးကာ မဆီမဆိုင်နတ်တွေကိုရမ်းသန်း ကျေးဇူးတင် လိုက်မိ၏။သူ တွေးနေတုန်း မြမြက သူ့ အ ချောင်းကို ဆွစုပ်သည်။ မြမြပါးစပ်လှလှ လေးထဲ သူ့ ဟာကြီး ဝင်နေတာကို ကြည့်ပြီး အားနာချင် သလိုလို။သို့ သော် မြမြက မက်မောစွာ စုပ် သွင်း လျက်ထ သည်ထက် ထ အောင် ပြုစု၏။ မောင်အေးက ကြာရင် မြမြပါးစပ်ထဲတွင် ပြီးသွားပြီး ဟိုဟာကြီး မလုပ်လိုက် ရဘဲ နေမှာစိုးလို့ ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။
မြ လေး ရယ် လုပ်ကြစို့ နော် ။သူများမယားကို ပိုင် စိုးပိုင် နင်း ခေါ်ကာ နို့ကြီးတွေကို ဆုပ်နယ်ပြီး နေရာယူသည်။မြမြ ခြေ နှစ်ချောင်းကို စုစည်းကိုင် ၊ အ ပေါ်ဆွဲမ ရှေ့ပြန်တွန်း၏။ပုစွန်ကွေးလို ပေါင် တံ လှလှ လေးကြားက မြမြဟာလေး ပေါ်ထွက်လာကာ သူ့ ကို ဖိတ်ခေါ်နေပြီ။မောင်အေး သေ သေ ချာချာ တေ့ထောက်ထားသည်။ တင်းပါးလှလှ ကြီးတွေက ဆွဲဆောင်နေသည်မို့၂ ချက်လောက် ဖြန်းဖြန်းနဲ့ ရိုက်မိသး၏။အောက်က မ ရွှေချောကသူ့ မိန်းမ မဟုတ်တိုင်း။ ထင် သလို လုပ်နေတာဘဲ ဟု စကားနာထိုး၏။ပြီးတော့ ခါးကို မြှောက်ကော့သည်။မြမြ ဆာနေပြီကိုး။မောင်အေး ကျကျနန သွင်းသည်။ပြန်ထုတ်သည်။ နောက် ပြန်သွင်း ထုတ်။ ထိတွေ့မှုတိုင်း အရသာက စွတ် ရှိသည်။
အား ကောင်းလိုက်တာ မြမြ ငါ့မယားရယ်။ကောင် မ ကလည်းကောင်းလိုက်တာ လင် ရယ် တဲ့။နာရီဝက်လောက်ကြာအောင် မောင်အေး အသားကုန် ဖြုတ်သည်။ စော်ကြီးကလည်း အရှုံးမ ပေး။အောက်ပင့် ပြန်ခွပ်သည်။လုပ်ပါ။ လုပ်စမ်းပါ့ လင် ရယ် ။အား ကောင်းလိုက်တာ ။ တခါမှ ဒီလို မ ကောင်းဖူးဘူး။ အ့့အ့့လုပ့်လုပ်ပါ့မောင် ရယ့်။မောင် အေး နှစ်ချီ ဆက် အသားကုန် ဆွဲ၏။မမြကလည်း အစွမ်းကုန် ပေးသည်။မ မျှော်လင့်ဘဲ ဝါးရတဲ့ ပွဲ။အပြင် မှာလည်း မချိမ်းသောမိုးက ရွာ။တကယ့်ကို အပြိုင် ကြဲကြပါလေတော့၏…ပြီး။